Nagu saabsan | Shijiazhuang (Yangzhou) Fayun Electric Co., Ltd.
Shijiazhuang Fayun Electric Company iyo Yangzhou Fayun Electric Company waxaa si wada jir ah loogu yeeraa Fayun Electric Co., Ltd. Shijiazhuang Fayun Electric Company waxaa la aasaasay sanadkii 2000, waxayna ku fadhidaa aag dhan 20,000 mitir murabac ah, oo ay ku taal magaalada Shijiazhuang, gobolka Hebei ee Shiinaha. Markay shirkaduhu sii wadaan inay horumariyaan oo ay koraan, shirkadda cusub ee magaceeda la yiraahdo Yangzhou Fayun Electric Company waxaa laga aasaasay magaalada Yangzhou, gobolka Jiangsu ee Shiinaha sanadkii 2010, iyadoo la diiwaan geliyay awood 50 milyan ah, oo leh goob 30,000 mitir murabac ah.
Shijiazhuang Fayun Electric Company waxaa la aasaasay sanadkii 2000.
Shirkaddu waxay ku fadhidaa dhul dhan 30000 oo mitir murabac ah.
Soo-saarista Sannadlaha ah
Wax soo saarkeena sanadlaha ah ee Birta Oxide Varistors waa qiyaastii 1,500 tan.
Waxaa cadeeyay IS09001: 2000 Nidaamka Maareynta Tayada Caalamiga ah.
Shirkadda Fayun Electric waxay ku takhasustay cilmi-baarista iyo soo-saarista Birta Oxide Varistors, Epoxy Fiberglass Rods / Tubes, Lightning Arresters, Composite Insulators, Cutout Fuses iyo iwm Wax soosaarkeenna sanadlaha ah ee Birta Oxide Varistors waa qiyaastii 1,500 tan, iyo tan Fiberglass Rods iyo Tubes waa ilaa 800 tan. Waxaan sidoo kale soo saarnaa insulators iyo hillaaca qabtayaasha 80 0000 sanadkii.
Tayada ayaa ah nolosha ganacsiga
Waxaa jira dhammaan noocyada soo saarista qalab, tijaabo dhammaystiran iyo qalab kormeer iyo nidaamka tayada shirkaddayada. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay imtixaanka Xarunta Sahlashada Qaranka ee Shiinaha iyo Xarunta Kormeerka Tayada Danab. Waxaa sidoo kale cadeeyay IS09001: 2000 Nidaamka Maareynta Tayada Caalamiga ah. Macaamiisheena ayaa si xushmad leh uga soo jeeda Faransiiska, Ruushka, Romania, Slovenia, India, Viet Nam ect. Wax soo saarka waxaa si weyn loogu isticmaalaa korontada, kiimikada warshadaha, tareenada, iskuxirka, gaadiidka hawada iyo rarida badaha. Shirkadda u hoggaansamaan "tayada waa nolosha ganacsiga" fikradda tayada, fiiro gaar ah u leh baahida suuqa, sharciyada iyo xeerarka, si ay u siiyaan macaamiisha wax soo saarka iyo adeegyada ku qanacsan.
Iyadoo loo marayo hal-abuurnimo madax-bannaan iyo horumar waara, shirkaddu waxay u qaadan doontaa aaladda zinc oxide / filinka muraayadaha muraayadaha sida udub-dhexaadka ah, waxay u qaadan doontaa hillaaca / qalabka isku-darka isku-xidhka aasaaska, waxayna ka dhigaysaa warshadaha qalabka korontada ka sii weynaada oo ka sii xoog badan. Iyada oo ku saleysan, waxaan u shaqeyn doonaa si adag si aan ugu dadaalno waxqabadka wax soo saarka wanaagsan iyo wax soo saar kaamil ah. "Inaad wax saxdid, inaad wax si fiican u qabato, inaad qabato shaqo horudhac ah, inaad horumar sameyso, inaad wax cusub sameyso" had iyo jeer waa ruuxa ganacsiga. Dhammaan shaqaaluhu waxay la jaan qaadi doonaan "tayada wanaagga, qanacsanaanta macaamilka, horumar isdaba-joog ah iyo ku-tiirsanaanta heer sare" siyaasad tayo leh, waxayna si joogto ah u wanaajineysaa nidaamka maaraynta tayada. Isla mar ahaantaana, si daacad ah u soo dhawow saaxiibada ganacsiga adduunka oo idil inay soo booqdaan warshaddeena iskaashi dheeri ah, gacmaha isqabsadaan guul-guul. Shirkadda Fayun Electric waxay si xiiso leh u rajeyneysaa ganacsi wanaagsan, deggan oo joogto ah.